Hiran State - News: Xidhibaan Mowliid Macaane Farmaajo iyo wasiiradiisa ha joojiyaano go,aanda ay maalinkasta soo saaraan.
Xidhibaan Mowliid Macaane Farmaajo iyo wasiiradiisa ha joojiyaano go,aanda ay maalinkasta soo saaraan.
Mogdisho:Xildhibaan Mowliid Macaane oo ah rug cadaa siyaasadeed xilala kala duwana ka soo qabtay dowladahii wadanka soo maray laga soo bilaabo tii kacaanka ilaa maanta uu yahay mudane baarlaarlaman ayaa kula taliyeye Masuuliyiinta dowlada iney ilaaliyaan axdiga qaranka kuna dhaqmaan.
Xildhibaan Mowliid Macaane ayaa sheegay in aan loo baahneyn go,aanadan iyo shirarkan ay maalin kasta qabanayaan Farmaajo iyo koox wasiiradiisa ka tirsan isagoo sheegay in ay xaalada sii murjineyso. Xildhibaanka ayaa sheegay in qilaafka ka dhaxeeya labada Shariif uusan aheyn mid shaqsi ah ee uu yahaya mid ku qotoma garab marid la garab maray sharcigii uu dalku lahaa.
Marka laga soo tago hadalka xildhibaanka ujeedada Mowliid Macaane uu ula talinayo hogaanka dalka Farmaajana ugu baaqayo inuu joojiyo shirarka iyo go,aanadais daba jooga ah, hadnae waxuu meesha ka saaray xildhibaanka fikir aad u qaldanaa oo ay aduunayda ka dhaadhicinayeen Farmaajo iyo dhawr wasiir oo xukuamdiisa ka tirsan oo iyagu wadamo badan oo ka mid ah kuwa daneeya arimaha Soamliya u sheegay in uusan jirin qilaaf u dhaxeeya hada'yadaha dowlada laakinse uu jiro qilaaf shaqsiyadeed oo labada Shariif u dhaxeeya.
Xildhibaan Mowliid Macaane waxuuka mid yahaya mudanayaasha baarlamaanka ee aaminsan in dalka soaliya laga saaro gumeel gaarka waxkasta oo ay madaxweynaha, xukumada iyo baarlamaanka Somaliya ku qaatataba. Somaliya oo 21 sano ku jirtay gumeysi dadban ayaa hadii doorashani sidii la rabay u dhacdo waxey noqoneysaa mudo 40 sano ku dhawaad markii uguhoreysay ee madaxweyne, gudoomiye baarlaman iyo ku xigeenadiisa lagu doorto gudaha wadanka.
Madaxweynaha Somaliya Shiikh Shariif oo daxadir ka sameeynaya arimaha Somaliya sida Farmaajona diideyn in wadanku ay doorashao ka dhacdo ayaa ka dhawaajiyey in waqtiga yar ee haray la mideeyo fikirka masuuliyiinta dowlada. R/wassare Farmaajo iyo xukuamdiisa oo horey ug fashilantay iney ka dhabeyso 100 kii maalmood ee ay horey u qabsatay ayaa hada ku mashquulsan iney shacabka ka dhaadhiciso inuu waqtiga ku yar yahay xukumaduna u baahan tahay waqti dheeri ah.
Waxaa isweydiin leh hadiiba ay dhab ka tahay oo ay shacabka ka saari karaan dhibta xukumada Farmaajo oo ay isku kalsoon yahiin mey isa soo sharaxaan si mudada ay hada codsanayaan mid ka badan u helaan?
· admin on April 30 2011 12:39:54 · 0 Comments · 1524 Reads ·
14,614,684 unique visits